giovedì၊ Gennaio 27၊ 2022
Tiffany Thiessen သည် တက်တူးအသစ်ရှိသည်။
Pamela Anderson က ကွာရှင်းပြန်တယ်။
Kate Hudson၊ Rani Rose နှင့် စတိုင်ကျကျ လမ်းလျှောက်ပါ။
ပင်မစာမျက်နှာ အသိုင်းအဝိုင်းခံစားပါ မူဆလင်များသည်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအားလုံးကိုဆန့်ကျင်သောအမျိုးသမီးများနှင့်အတူရှိသည်။ ကမ္ဘာ့နေ့ ...
မူဆလင်များသည်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံအားလုံးကိုဆန့်ကျင်သောအမျိုးသမီးများနှင့်အတူရှိသည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးနေ့ ... W WOMEN
နိုဝင်ဘာ 25, 2017
ယခုနှစ်ပထမ ၁၀ လတွင်ကျူးလွန်ခံရသူ ၁၁၆ ဦး ရှိပြီး၊ သုံး ဦး အနက်တစ် ဦး မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမျိုးသမီးသန်းပေါင်းများစွာသည်လိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်းအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုကိုခံစားကြရသည်
24 နိုဝင်ဘာ, 2017 di ကြည်လင်သောပီဇီဂျင်တီ
နှစ်ရက်ခွဲတစ်ရက် italiaတစ်ယောက်သေသွားတယ် မိန်းမ သူတို့ကသူမကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရဲ့လက်ကနေ ဤကဲ့သို့သောသူမ၏အသက်တာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်နောက်ဆုံးမှာအန်နာ Lisa Cacciari ဖြစ်သည်။ သူသည်အသက် ၆၅ နှစ်ရှိပြီး Bologna ပြည်နယ် Budrio တွင်နေထိုင်သည်။ သူမ၏ခင်ပွန်း Athos Vitali, 65 နှစ်, သူမ၏ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ အချည်းနှီးအကြောင်းပြချက်များအတွက်တစ် ဦး ကရန်ပွဲ, သူမသူ့ကိုဆူခဲ့သည်။ သူတို့ကသူတို့ငြင်းခုန်ကြောင်းဖြစ်ပျက်နီးပါးဘယ်တော့မှနီးပါးကရုတ်တရက်မထိုက်မတန်များအတွက်တရားမျှတကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့သူကပြောသည်။
"ဒါဟာအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်သော်လည်းအနည်းဆုံးဖြစ်ပါသည်တစ် ဦး circumscribed ရာဇဝတ်မှုအရင်ကထင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျူးလွန်တာတွေမဟုတ်ဘူး” ဟုမြို့တော်ဝန်ကပြောသည်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်ရေးဌာနများကချက်ချင်းပင်စိန်ခေါ်ခဲ့သည် ကျူးလွန်မှုတစ်ခုလုပ်ရပ်။ Emilia-Romagna ၏အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးစင်တာများ၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကယောက်ျားများအားအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသေဆုံးနေသောအမျိုးသမီးအရေအတွက်များပြားခြင်းကြောင့်သတ်မှတ်ထားသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့် သတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပါ။ သူတို့ကထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှု၏ခဏအခိုက်အမျက်ဒေါသနှင့်အမျက်ဒေါသကိုမသတ်ကြဘူး, က လူသတ်မှုယင်းအစားနှစ်ပေါင်းများစွာကြာသောအကြမ်းဖက်မှု၏နိဂုံးသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်တွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်အာဏာနှင့်အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတို့၏အရင်းခံဖြစ်သည်”
၏ပထမ ဦး ဆုံး 10 လအတွင်း 2017 ဖြစ်ရပြီ114 အမျိုးသမီးများသေဆုံး ဒေတာ၏စတုတ္ထအစီရင်ခံစာ၌တည်ရှိ၏ ယူရို အဆိုပါအခါသမယအပေါ်ဖြန့်ဝေအီတလီမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး, အပေါ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး အရာအပေါ်ဂုဏျဖြစ်ပါတယ် 25 နိုဝင်ဘာလ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသမီး ၁၅၀ ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၄၂ ယောက်ရှိခဲ့သည်။ ၅.၆% တိုးလာသည်။ Lombardy တွင်သား ၂၀ ကျော်နှင့် Veneto တွင် ၁၇ ဦး ရှိသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှယနေ့အထိအီတလီ၌စေတနာအလျောက်လူသတ်မှုခံရသည့်အမျိုးသမီးများသည် 3000လူပေါင်း ၃၇.၁% သေဆုံးခဲ့သည်။
ဤအကြောင်းပြချက်အတွက်အမျိုးသမီးများစွာအတွက်၎င်းသည်အခက်ခဲဆုံးအဆင့်ဖြစ်လျှင်ပင်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်မဖြစ်မနေပြစ်တင်ရှုတ်ချသည် ဥပဒေများပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ဤရာဇ ၀ တ်မှုများအားအစီရင်ခံခြင်းမပြုဘဲတရား ၀ င်တရားဝင်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်ဟုတောင်းဆိုသူများစွာရှိသည်။ အီတလီ၌အကြမ်းဖက်မှုခံစားခဲ့ရသောသို့မဟုတ်ရက်စက်စွာဆက်ဆံခံရသည့်အမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်ဆံသည့်အသင်းအဖွဲ့များစွာရှိသည်။ ဒေသခံစင်တာများနှင့် Il နှင့်အတူအမျိုးသားရေးအသင်းအဖွဲ့များရှိပါတယ် ပန်းရောင်တယ်လီဖုန်းသောတုံ့ပြန်မှု 06-37518282,အကြမ်းဖက်မှုမခံရစေရန်အမျိုးသမီးများ၏နေအိမ်eပြောကြပါ၊ ပိုက်ကွန်ထဲမှအမျိုးသမီးများသည်အကြမ်းဖက်မှုမခံရရန်ပြောပါဒေသတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကိုဆက်သွယ်ပေးသည်။
အသင်းအဖွဲ့များသည်ပထမ ဦး ဆုံးသောလူမှု ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ရဲများထံမှအကူအညီတောင်းခံသူများမှာအမျိုးသမီးများဖြစ်သောအမျိုးသမီးများ၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်မီဒီယာများသို့မရောက်ရှိစေရန် ကိစ္စတစ်ခုသုံးရက်တိုင်း။ သူတို့ထောင်နှင့်ချီသောအဖြစ်အပျက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့၏မူလအစမှာအဖြစ်ကဲ့သို့သောအမှုများ။ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်သည်သေသည့်နေ့ဖြစ်သည် အမျိုးသမီးသုံးယောက်ညီအစ်မသုံးယောက်။
၁၉၆၀ တွင် Patria Mercedes၊ María Argentina Minerva နှင့် Antonia María Teresa တို့ရှိခဲ့သည် မီရာဘာ သူတို့အသတ်ခံရတယ်။ သူတို့၏စတုတ္ထအစ်မBélgica Adela နှင့်အတူသူတို့သည် Rafael Leónidas၏အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည် Trujillo ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ၌တည်၏။ ထရူဟီယိုအာဏာရလာသောအခါသူတို့၏မိသားစုသည်အရာရာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပြည်သူပိုင်သိမ်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်အာဏာရှင်မှသိမ်းယူခဲ့သည်။ သူတို့သည်အစိုးရအားဆန့်ကျင်သော“ ဇွန် ၁၄ လှုပ်ရှားမှု” ထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ nom de guerre ဖြစ်ခဲ့သည် လိပ်ပြာလိပ်ပြာများ။
၁၉၆၀၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် Mirabal အစ်မများသည်သူတို့၏ခင်ပွန်းများထံသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်ထောင် Puerto Plata ၏။ သူတို့ခရီးသွားနေသည့်ကားကိုကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးများအားကြံစိုက်ခင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း၊ အသေသတ်ခြင်းကိုရိုက်နှက်။ သူတို့၏အလောင်းများကိုကားထဲတွင်ပြန်ထည့်ထားပြီးမတော်တဆမှုတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ရန်ချောက်ထဲမှပစ်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 54 ၏ resolution ကိုနံပါတ် 134/17 နှင့်အတူ 1999 ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးနေ့ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်အထိ ၁၆ ရက်တာလှုပ်ရှားမှုများကိုပြုလုပ်သည် ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု.
"ကပ်ရောဂါအတိုင်းအတာတစ်ခုကကျန်းမာရေးပြproblemနာ" ။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မာဂရက်ချန်းသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည် 2013 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအမျိုးသမီးများခံစားခဲ့ရသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်သောအကြီးမားဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် i အပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုပုံစံတစ်မျိုးမျိုးကိုခံစားခဲ့ရသည် အစောပိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြား။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးတွင်အမျိုးသမီးသုံးပုံတစ်ပုံကျော်ရှိသည်။ ယူနီဆက်ဖ်ကိန်းဂဏန်းများအရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အမျိုးသမီးသန်းနှင့်မိန်းကလေးသန်း ၂၀၀ ခန့်ခံစားခဲ့ရသည်လိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်ခြင်း။ ဥရောပတွင်အမျိုးသမီး ၁၀၀ တွင် ၂၅ ဦး သည်မိတ်ဖက်များ၏နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုကိုခံရသည်။ အီတလီနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ရပ်သုံးခုအနက်မှတစ်ခုတွင်တွေ့ရှိရသည် သူတို့မကြာခဏရှိနေဆဲဖြစ်သည် မိဘမဲ့အပြစ်မရှိသောသားသမီး.
"အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်မှာကျား၊ မရေးရာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်သည်"လေးစားမှု" ယခုနှစ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများထဲမှသူ၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင်သူရေးသားခဲ့သောဝါကျကိုကိုးကားသူမှာသူဖြစ်သည်။ "မင်းကိုနာကျင်ရင်အချစ်မဟုတ်ဘူး။ သင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းဟာမင်းဖြစ်ရတာကိုမကြောက်ရင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ဘူး။Noemi Durini သူမရဲ့ရည်းစားမသတ်ခင်ရက်အနည်းငယ်မှာသူမတင်ပြခဲ့သည်။
သူ့အမှုကိုအမျိုးသားသတင်းရောက်ပြီးလူတိုင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဇာတ်လမ်းတိုင်းအတွက်အများကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ် နေ့စဉ်အကြမ်းဖက်မှု အဘယ်သူမျှအစဉ်အဆက်အကြောင်းကိုဘာမှသိကြလိမ့်မည်။ Inအပေါ်ကပြခန်း အမျိုးသမီးပုံပြင်တွေရှိတယ် ခင်ပွန်းသည်များ၊ ရည်းစားများနှင့်အပေါင်းအဖော်များလက်ချက်ဖြင့်၊ သူတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးသူများ၏လက်ချက်ဖြင့်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ အချို့မှာမျက်နှာများရှိပြီးအခြားသူများမှာအားလုံး၏သင်္ကေတများဖြစ်သောကြောင့်မဟုတ်ပါ အသံတိတ်အကြမ်းဖက်မှု နေ့တိုင်းဖြစ်ပျက်သောအစီရင်ခံတင်ပြကြသည်မဟုတ်။
နောက်ဆောင်းပါးDILETTA LEOTTA နှင့်သူမ၏ဓာတ်ပုံများ